घमण्ड पतनको सङ्केत हो — News of The World
स्माइल गजुरेल,सिन्धुपाल्चोक पौष २९, २०७४
सुनेका थियौं पहिला बढेमानको डाइनोसर थियो रे । ठूलो तथा शक्तिशाली जीव जो समायानुकुल र सापेक्ष हुन सकेन त्यसपछि उसको समाप्त भयो । वनको राजा बाघ आफू शक्तिशाली र घमण्डी भएकोले हो कि लोप हुने अवस्थामा छ । यस्तै–यस्तै विषयमा चासो राख्ने सम्मान हेलम्बुको सानो गाउँमा बस्दथ्यो । हेलम्बु आफैँमा एक रमणीय ठाउँ हो जहाँ सयौँ पर्याटक आउने जाने गर्दछन् । यो हिमाल मुनिको पहिलो मानव बस्ति हो । पर्यटकीय क्षेत्र हुनाले सम्मानको लगनशिलता देखेर एक अमेरिकी पर्यटकले निःशुल्क पढाए ।
सम्मान नाम र व्यक्तित्व आफैँमा अर्थपूर्ण छ । उनी आदिवासी शेर्पाका छोरा हुन् । हेलम्बु क्षेत्रकै उनी एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर ईन्जिनियर बिषयमा स्नातक हासिल पछि अध्ययनका लागि उनी अमेरिका प्रस्थान गर्छन् । अमेरिकाबाट अध्ययन र जागिरका सिलसिलामा यूरोप, दक्षिण(अमेरिमा, अफ्रिका, एसिया, र अष्ट्रेलिया लगायत विश्वका १७० देश घुमे । उनले एक रिसर्च गरे आधुनिक प्रविधी, ज्ञान, र मानव सभ्यताको बारेमा । विस्वको जुनसुकै देशका बिद्रोहीहरुमा अमेरिकी हतियार पुगेको र आफु शक्तिशाली बन्न कुनै विषयबस्तु बनाएर जनताको आस्थामा फुट ल्याएको उनको अनुसन्धानले देखायो ।
उनी बुध्द धर्मावलम्बी शेर्पाको छोरो हुनाले शान्त तर विज्ञ थिए । अमेरिकी सङ्घीय सरकारले सम्मानलाई सल्लाहाकार बनायो । उनको बिचारमा ज्ञान, प्रविधी , बिचार र बिबेक आदि मानव कल्याण, शान्ति, बिकास र प्रणालीमा खर्चिने हो भने अमेरिका विश्वको ढुकढुकी हुन्थ्यो । उनी आफुले कमाएको पैसा छात्रवृत्ति, बाटोघाटो निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, र बौध्द गुम्बा निर्माणमा लगाउँथे । उनलाई अमेरिकी ज्ञान, प्रविधि बिचार र प्रणाली चाहिने कार्य भन्दा फरक रुपमा शाषकले प्रयोग गरिरहेको कुरा सरकार सामु पोखे । त्यहाँको शाषक र सैन्य अधिकृतसँग आफ्नो जिज्ञासा पोखे तर ती अमेरकी शाषकले नेपाली विज्ञ सम्मानको कुरा के को सुन्थे ?
आफू विजेता र शक्तिशाली हुन निर्दोष हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु हमला गर्ने, हतियारको व्यापार गरेर विश्व नै असान्त बनाइदिने, खाडी देशहरुसँग परमाणु र जैबिक हतियारको झुटो लाञ्छना लगाएर हमला गर्ने र त्यसमाथि सम्प्रभुता जगाउने, हतियार दिएर बिद्रोही पैदा गर्ने, र अन्तमा आतंककारीको बिल्ला भिराएर तिनिहरुलाई समाप्त गर्ने कार्यले कुनै दिन अमेरिकाले ठूलो धक्का लाग्ने कुरा उनले शाषकलाई सम्झाए । डलर खन्याएर साम्प्रदायिक दंगा भड्काउने र हतियार बेच्ने जस्ता कार्य गलत हुन् र आधुनिक ज्ञान, प्रविधी र बिकास सही कार्यमा लगाउँदा पनि अमेरिका विश्वको शक्तिशाली देश बन्न सक्छ भनेर शाषकलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । सैनिक प्रमुखलाई गएर भने, “हेर्नुहोस्, एक शाषकलाई विश्वको शक्तिशाली बनाउनलाई लाखौँ आर्मी र अमेरिकी जनतालाई किन बलिको बोका बनाउनु हुन्छ ? युध्द भयो भने हाम्रो अमेरिकाले लाखौँ निर्दोष जनता, भौतिक क्षति र आर्मी गुमाउनु पर्नेछ । हामीसँग हतियार मात्र रहनेछ । लास माथी शाषन गर्नेलाई विजेता भनिदैन, हामीले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनेछौं ‘नेपाली विज्ञको कुरा के को सुनाइ हुन्थ्यो र शाषकले भड्काउ भाषण दिन थाल्यो । दिनहुँ उत्तर कोरियालीलाई धम्की दिन थाल्यो । आफु सुरक्षित हुन उत्तर कोरियाले पनि हतियार बिकास गर्यो । उत्तर कोरियालाई लिबिया, सिरिया र ईराकमा झुटो आरोप लगाएर हमला गरेको र शाषक लगायत आर्मीलाई मारेको जानकारी थियो ।
आत्मसमर्पण गर्दा पनि आफू असुरक्षित ठहरिए पछि उत्तर कोरियाले अमेरिकी धम्की उसैको भाषामा फर्काउन थाल्यो । आफू शक्तिशाली देखाउन अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि हमला थाल्यो । बम र बारुदले लाखौँ मान्छे र निर्दोष मारिए । अन्त्यमा उत्तर कोरियाले चार परमाणु हतियार न्युयोर्क , क्यालिफोर्निया लगायत चार शहरमा खसाल्यो । जसका कारण पुरै अमेरिका क्षतविक्षत भयो । करोड करोड मानिसहरू एकै झमटमा स्वाहा भए । अर्कातिर धेरै भौतिक सम्पत्तिहरू क्षणभरमै मन भक्कानिने भग्नावशेषमा परिणत भए । देशमा आर्थिक विपत्ति लाग्यो । युध्दमा नर्थ कोरिया तहसनहस भयो तर युद्धको हुँकार गरिरहेको अमेरिकी युद्ध तामसले उसैका जनताको आत्मसम्मान जित्न सकेन । शक्तिशालीको रुपमा हतियार थियो तर जनताले बिरोध जनाए । युध्द रोकियो तर अमेरिकी महाशक्तिशाली सपना तुहियो ।
सम्मान नेपाल फक्र्यो र पशु जस्ता विज्ञसँग बस्नु आफ्नै खतरा हुने सम्झियो । सायद उसको यो बिचार मानेको भए अमेरिका विस्वका सबै मान्छेको धड्कन हुने थियो । अपराधिक मानसिकताले शक्तिशाली शाषक बनाए पनि मानव कल्याण नहुनाले अमेरिका आफैँमा अस्थिर रहन्छ । जनता र विश्व समुदायको मन र आत्मा जितेको शाषक र देश मात्र विश्वको शक्तिशाली हुन सक्छ ।
हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं ६ गोहोरे बेसी काफ्ले,